Mitambo, 01 Kurume 2017
Chitatu 1 Kurume 2017
Kukadzi 20, 2017
Caps United neNgezi Platinum Stars Dzosimudza Mureza weZimbabwe muNhabvu
Zvikwata zvemuZimbabwe zvakasimudza mureza wenyika mumakundano eCaf Champions League neCaf Confederation Cup.
Kukadzi 13, 2017
Caps United ne Ngezi Platinum Stars Dzosimudza Mureza weZimbabwe muCaf
Chikwata cheCaps United ne Ngezi Platinum Stars zvatanga makundano azvo emuAfrica zvinodakadza mushure mekuita mangange kunze kwemusha mumitambo yavo yekutanga, izvo zvavasiya vaine mukana wakasimba wekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Ndira 30, 2017
Vechidiki Vodzidziswa Mutambo weTsiva kuChitungwiza
Vechidiki kubva muzera remakore mapfumbamwe vanenge vachidzidziswa nezvetsiva nevadzidzisi avo vaimbotamba mutambo uyu kusanganisira VaPamsen Sangulani avo vaimbove nebhande remukombe rehuremu hwemiddleweight muZimbabwe.
Ndira 27, 2017
Studio7 Inosvitsa Makore Gumi neMana Ichitepfenyura
Nhepfenyuro yeStudio7 yasvitsa makore gumi nemana itipfenyura zviri kuitika muZimbabwe.
Mabasa Ane Chekuita neTsika neMagariro Okurudzirwa Kuitwa
Mabasa ane chekuita netsika nemagariro evanhu akaita sekuimba, kuita zvemitambo, kana kuveza, anotarisirwa pasi nevanhu vakwanda achionekwa seasina maturo uye vanhu vanoaita, kunyanya vanhukadzi, vachionekwa sevanhu vane hunhu husina kunaka.
Ndira 25, 2017
Nhengo yeZanu PF Yokumbira Hurumende Kukanda maWarriors Mumabharaki eMauto
Kukundwa kwechikwata chenyika chemutambo wenhabvu, Zimbabwe Warriors, kumakwikwi eAfrica Cup of Nations, kwakonzera mutauro mukuro muparamende, vamwe vachiti vatambi vechikwata ichi vakandwe mumabharaki emauto.
Ndira 24, 2017
Zimbabwe Inoburitswa muAfcon 2017
Kunyange hazvo Knowledge Musona naTendai Ndoro vakazorova havo mambure, mutambo wanga watopera kare.
Zimbabwe Warriors Yosimudza Mureza kuGabon
Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chakasimudza mureza weZimbabwe mudenga kuma 2017 Africa Cup of Nations Finals uko vakaita mangange.
Ndira 13, 2017
Zimbabwe Yotashurana neAlgeria neSvondo
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, VaElliot Zhanje, vanoti vachitarisa matambiro anga achiita maWarriors munzira yekuenda kuGabon uku, Algeria inodamburwa.
Chikwata ChemaWarriors Choita Mangange 1 kwa 1 NeCameroon Mumutambo Wekuedzana Simba
Chikwata chemaWarriors chaita mangange ne Cameroon 1 kwa 1 pamutambo wekuedzana simba watambwa kuCameroon nhasi. Kunyangwe zvazvo panga pane makakatanwa pakati pesangano reZIFA nevatambi venhabvu vemaWarriors pamusoro pemari dzavo dzemihoro vatsigiri venhabvu vanoti vari kufara nekutamba kwaita chikwata ichi.
Ndira 09, 2017
Mabatirwo Akaitwa Chikwata cheZimbabwe Warriors Otsamwisa Vakawanda
Veruzhinji muZimbabwe havasi kufara nemabatirwo akaitwa chikwata chemaWarriors apo chaive mukamba chichigadzirira makwikwi e2017 Africa Cup of Nations.
Ndira 06, 2017
Vanofarira Nhabvu Votsigira Chikwata chaPasuwa
Vatsigiri venhabvu vakafadzwa nechikwata chakadomwa nemurairidzi wemaWarriors, Kalisto Pasuwa, icho chiri kunokwikwidza kuma 2017 Africa Cup of Nations.
ZIMRA Yonetsana neveMabhizimisi paNyaya yeMitero Inonzi Ibhadharwe neDhora rekuAmerica
Vamwe Vanoongorora zveMatongerwo eNyika Vanoti Zvishoma Zvashanduka Kubva Zvakabva VaMugabe
Varume Vanonetseka neNyaya yeBonde Vokurudzirwa Kunorapwa
Vagari veKuMasvingo Voronga Kuratidzira neNyaya yeKushaya Mvura Mudzimba
Madzimai Ovhenekwa Chirwere CheGomarara PaChena kuMashonaland West